Website တွေ ဘာဖြစ်လို့ မအောင်မြင်ကြတာလဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Website တွေ ဘာဖြစ်လို့ မအောင်မြင်ကြတာလဲ ?
Posted by manawphyulay on Dec 25, 2010 in News | 8 comments
မြန်မာပြည်မှာ ကွန်နရှင်မကောင်းတာ အဘန်းခံရတာတွေလဲ ပါတယ်လေ..။
အင်း ပါတော့ ပါတာပေါ့ အောင်မြင်ချင်ရင် ထိုးပေါက်ရမှာပဲလေ………
မြန်မာပြည်တွင်းက တင်တဲ့ဝက်ဆိုက်တွေ မအောင်မြင်ရတာတခုက … ခိုင်မာစိတ်ချရတဲ့… အင်တာနက်ငွေပေးငွေယူ စံနစ်မရှိတာက အဓိကအကြောင်းတခုလို့ထင်ပါတယ်..။
ငွေကြေးစီးဆင်းတာကို ..အနှောက်အယှက်တွေရှိနေသမျှ … တိုးတက်စရာလမ်းမမြင်မိပါ..။
နောက်တခုက … နည်းပညာပေါ့နော..။
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါပေမယ့် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကြောင့် မလေ့လာ မစူးစမ်း မစမ်းသပ်ကြတော့ဘူးဆိုရင် နည်းပညာ တိုးတက်မှုအပြင် ကျန်တဲ့ အရာတွေအားလုံး တိုးတက်မှု ရှိလာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ နည်းနည်းသိ နည်းနည်းကနေ လေ့လာမယ်။ ပြန်ပြီ မျှဝေမယ် အသုံးချမယ်ဆို၇င် ခုလို နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ မတိုးတက် မအောင်မြင်လာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ မနော မြင်မိတာကိုပါ။ ငါ ဘာမှမသိဘူး။ မသိတော့ မလေ့လာ၊ မလေ့လာတော့ မလုပ်ဖြစ်၊ မလုပ်တော့ ဘာမှမတတ်နဲ့ ဒီသံသရာကြီးထဲမှာ လည်နေမှာပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် မနောပြောတဲ့အချက်တွေကကလည်း မှန်ပါတယ် သို့သော်လည်း … ကုမ္ပဏီတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြိုင်ဆိုင် ၀က်ဖ်ဆိုက်တွေလွင့်ထူကြတယ် … ၀က်ဖ်ဆိုက်လိပ်စာလေးတစ်ခုမှမရှိရင် သိက္ခာကျတယ်ပေါ့ … တစ်ချို့ဆို ၀က်ဖ်ဆိုက်နှစ်ခုလွင့်တင်တယ် .. … ။ ကိုယ်တိုင် ၀က်ဖ်ဆိုက်မလုပ်တတ်တော့လည်း လုပ်တတ်တဲ့ ရေးစားနေတဲ့လူတွေကို ငွေပေးပြီးအပ်ရတယ် .. ပထမဆုံး အကြိမ်က တော့ လို ချင်တဲ့ အချက်လက်တွေ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့ … နောက်လတွေကြတော့ update လည်း မလုပ်တတ်ဘူးလေ ။ ရေးတဲ့လူကို သွားပြန်ခေါ်ပြီးdata ထပ်သွင်းရင် ပြောင်းရင် ပိုက်ဆံကလည်း ပေးရမှာကိုးဒါနဲ့ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာပဲပြပြီး တင်ထားကတည်းက အပြောင်းလဲမလုပ်တာ ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ဆိုက်မှာ လာပြီး feedback ပေးတာမျိုးဆိုရင် အီးမေးလ်က boss ဆီပဲ ၀င်ပြီး ကိုယ်က မသိရလို့ မပြင်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီ boss ကလည်း တစ်နှစ်မှ မေးလ် တစ်ခါလောက်ဖွင့်တဲ့လူဆိုရင် သွားပြီပဲ…. Boss ပဲ အီးမေးလ်တွေဘာတွေမသုံးပဲနေမလားလို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေဦးမယ်… မယုံမရှိနဲ့နော်… နိုင်ငံ လေးခုမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးတစ်ယောက်က အီးမေလ်းမပြောနဲ့ ကွန်ပျူတာတောင် မသုံးတတ်ပဲ …. အလုပ်လုပ်လာတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ဦးပိုင်းကမှ မသိရင်မဖြစ်တော့တာမို့အပြေးလွှားသွားသင်ရပါသတဲ့တဲ့… ။
အဲဒါဆို ..ဈေးကွက်က တောင်းဆိုနေပြီပဲ..။
၀က်မာစတာကုမ်ပဏီထောင်ပြီး… ၀က်ဘ်ဆိုက်တခုကို ..ပြင်ခဆင်ခ အပ်ဒိတ်လုပ်ခ.. တလ ၁သောင်း ..၁နှစ်စာ ၁သိန်းဆို လိုက်ကောက်ပေါ့..။
အခု ၁၀၀ လောက် လိုက်ကောက်လိုက်ရင်ပဲ.. အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းတခုရနေပြီ..။
ဈေးသက်သာရင် … ယူအက်စ်က ကတ်စတန်မာတွေပါ ..ရှာပေးလိုက်ဦးမယ်..။
ကိုခိုင်ပြောသလိုဆားဗစ်မျိုး မြန်မာပြည်မှာ ရှိပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ကျနော်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီက အိုင်တီအက်မင်နစ်စတြေတာ ရုတ်တရက် ထွက်သွားတော့ အပြင်လိုကယ် ကုမ္မဏီကို လစဉ်ကြေး ပေးငှားတာ တွေ့ဖူးတယ်။ ကုမ္မဏီကိုတော့ အက်ဖ်အီးစီနဲ့ပေးရပြီး အဲဒီ ကုမ္မဏီကတော့ သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကျပ်ငွေနဲ့ပြန်ပေးတယ်။ ဝန်ထမ်းက အပတ်စဉ် သတ်မှတ်ရက် တိုင်းလာပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံတာတွေ လုပ်ပေးတယ်၊ အရေးပေါ် ခေါ်ရင်လာတယ်။
Kai>>>>> အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းတခုရနေပြီ..။ This Right!….